PressReader - Grocott's Mail: 2018-02-02 - Im­pumelelo isezan­dleni za­kho
Im­pumelelo isezan­dleni za­kho
Grocott's Mail - 2018-02-02 - NEWS - NguNTOMBUVUYO NGAPHU
Liyinene elithi in­doda itya uku­bila kwe­bunzi layo kuba ngeyin­gen­gom­ch­weli ophume izandla uThabo Jan­uary (29) ukuba wayengazange asebenze nz­ima ez­i­fundisa ukuch­wela ngonyaka ka2013.
UJan­uary zange awuyele sikol­weni um­sebenzi wobuch­weli. Uthi ngelixa wayefunda iz­ifundo zokuphatha ishishini eBhayi ngo-2013, wayedla ngokuthuthela usi­bari wakhe ongum­ch­weli ama­planga, ifen­it­shala nezinye iz­ix­hobo zokuch­wela ukusuka eBhayi ukuya eRhini, kodwa en­gaqondi ukuba yena angaze awenze lo msebenzi wokuch­wela ngenye imini.
“Ndan­dithanda ke ukubuka um­sebenzi wabo ndi­bone ukuba mhle kakhulu. Kodwa ndibe ndin­ge­nam­fanek­iso wam woba ndingaze ndi­wenze,” ut­shilo uJan­uary.
Ngenye imini, enye yeeklayenti zika­si­bari wakhe yay­i­funa uk­wen­zelwa iidrowa ngokungx­amisek­i­leyo, wabe usi­bari yena en­gekho. Uthi uJan­uary wayebile emanzi ezama ukuwenza ngok­wakhe lo msebenzi, ekhokelwa ngusi­bari wakhe efowunini. Wakhut­hazeka emva kokubona izi­phumo ez­in­tle zom­sebenzi wakhe kunye ne­mali away­i­fu­manayo, wat­sho waqonda ukuba makayeke isikolo aqhubeke nokuch­wela.
Ngalo nyaka um­nye, uJan­uary waz­iqalela ishishini lakhe lokuch­wela yaye engum­ntu wokuqala ukuzivulela ishishini kusapho lwakhe. Uthi waqala ngok­wenza izitendi ze-TV kuba en­gekazithembi ukuba an­gawenza amakhit­shi. Kun­goku nje, wenza iz­into ez­i­fana nok­u­fakela iikhab­hathi, izitendi ze-TV, iitafile za­segumbini loku­phumla, ii­wodro­phu nezinye. Iqela la­bantu bayawun­coma um­sebenzi kaJan­uary kwikhasi likaFace­book lenkam­pani yakhe iThabo J Cus­tom De­signs.
“Ndiyawuthanda um­sebenzi wakho! Une­tal­ente!" ub­hale wat­sho uMi­landa Coet­zer. USi­luthando Njomba yena ub­hale wathi; "Mhle um­sebenzi wakho Thabo, yhu!” UJan­uary uthi ukholwa kuku­jonga ku­makhasi ak­wi­webhu afana noPin­ter­est, iint­lobo-ngeent­lobo zemisebenzi yobuch­weli ze azame ukuyenza ngok­wakhe. Uthi yena ukholwa kuk­wenza iz­into ez­inz­ima kuba zona zin­tle nan­gakumbi. “Nd­abona ukuba abantu abasa­funi nto ilula ngoku,“ut­shilo uJan­uary.
Nang­ona esenza um­sebenzi on­comekayo kwe­zobuch­weli ngoku, uJan­uary uthi uzokubuyela esikol­weni ayokugqibezela iz­ifundo zokuphatha ishishini. Uthi udibana ne­min­geni kwishishini lakhe eye­nza ukuba abone isidingo sokuyoku­funda iza­khono ezithile esikol­weni, ez­i­fana noku­lawula imali nokuthengisa.
Njengeen­zame zoku­nikezela ku­luntu lwen­dawo avela kuyo, uJan­uary uthi uzama kan­gan­goko ukuqinisek­isa ukuba abantu abaqe­shayo ngabo bavela en­g­ingqini yakhe, iHlalani. Uthi kwishishi lakhe ngoku usebenza na­bantu abenza um­sebenzi oham­be­lana nokuch­wela uk­wen­zela ukuba iik­layenti za­khe zin­ga­sokoli. Usebenza nom­ntu ofakela iithay­ile, om­nye ufakela um­bane, ngelixa om­nye efakela im­ib­hobho.
UJan­uary uthi eminye yemin­geni ahlangabezana nayo njen­go­so­mashishini, kukungabin­abo oomat­shini abakhulu bok­wenza lo msebenzi, yaye loo nto iban­gela ukuba nga­manye amaxe­sha an­gak­wazi ukuwugqiba kwangeth­uba um­sebenzi wakhe. Uk­wathi iik­layenti ziyakhawuleza ukukha­lala, zingabi­na­monde xa ethe wal­ibaziseka ngenxa yokungabin­abo oomat­shini abakhulu, ze an­gawugqibi kwangeth­uba um­sebenzi.
“Abantu bakuthi abasiniki thuba. Bangx­am­ela ukuse­tyen­zelwa nga­bantu abamhlophe kuba be­sithi bona benza um­sebenzi on­ge­naziphene,” ut­shilo uJan­uary.
Enye into ebachanayo uJan­uary nabasebenzi bakhe kukuba ben­ge­nan­dawo inkulu ngok­wane­leyo yokuseben­zela. Kun­goku nje, baseben­zela kwigaraji enc­inci kok­wabo. Kodwa ke, uJan­uary uthi ngoku benza amalungise­lelo oku­fu­mana umh­laba abazok­wakha kuwo in­dawo yokuseben­zela eRhini. Ngenxa yokusebenza nz­ima kwakhe nokuz­imisela, uJan­uary ukhut­haze umtyali-mali wabu­cala ukuba abenomdla wok­u­faka isandla kwishishini lakhe. “Ndiyayithanda into endiyen­zayo futhi ndi­funa ukukhulela apha,” ut­shilo uJan­uary.